Qalalaasaha Israa’iil iyo Falastiin ee Qasa iyo Isbarbardhigga awoodda militari ee Israa’iil iyo Xamaas | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qalalaasaha Israa’iil iyo Falastiin ee Qasa iyo Isbarbardhigga awoodda militari...
Qalalaasaha Israa’iil iyo Falastiin ee Qasa iyo Isbarbardhigga awoodda militari ee Israa’iil iyo Xamaas
Dagaalka u dhaxeeya Israa’iil iyo Qasa ayaa sii socda wali inkastoo ay sii xoogeysaneyso rajada laga qabo xabad joojin.
Marka isbarbar dhig guud la sameeyo Israa’iil iyo Xamaas waxay heystaan hub iyo awood militari oo aan isu qalmin.
Senator-ka Mareykanka ee lagu magacaabo, Bernie Sanders, ayaa isu diyaarinaya in uu Aqalka Sare hor keeno Hindise Sharciyeed Israa’iil ka hor istaagaya Hub ay Mareykanka uga soo iibsan rabtay lacag dhan $735m (£520m), kaas oo xukuumadda Tel Aviv ay dooneysay inay kuwii xoojiso cududdeeda.
Awoodda militari ee Israa’iil
Qiimeyntii dalalka ugu awoodda badan caalamka uu sanadkan 2021-ka sameeyay wargeyska ka faallooda awoodda ciidamada caalamka ee Global Fire Power, waxay Israa’iil ka gashay kaalinta 20-aad,. Diiwaankan wuxuu ka kooban yahay 140 waddan.
Tirada guud ee Shacabka Israa’iil wuxuu Wargeysku ku qiyaasay 3,643,700 oo qof, kuwaasoo 3,024,271 ka mid ah ay diyaar u noqon karaan haddii looga baahdo adeegga militariga. Waxaa kale oo xusid mudan in sharciga Israa’iil uu dadka Yuhuudda ah khasab uga dhigayo in ay soo maraan ciidannimada.
Tirada ciidamada Israa’iil
Militariga Israa’iil guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 643,000 oo askari.
Tirada guud ee diyaaradaha militariga Israa’iil waa 595 diyaaradood.
128 ka mid ah waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaanno “helicopter”.
Dhinaca badda, Israa’iil waxay heysataa 65 markab oo isugu jira kuwa waaweyn ee diyaaradaha qaada, kuwa biyaha hoostooda quusa iyo kuwa kormeerka xeebaha sameeya.
Miisaaniyadda ku baxda gaashaandhigga Israa’iil waa lacag gaareysa $16,600,000,000 oo doolar.
Ma jiro liis Falastiin ay ku jirto oo qiyaasaya awoodda militari ee falastiiniyiinta laakiin cududda la dagaallameysa Israa’iil waa ururka Xamaas oo fariisinkiisa ugu weyn uu yahay Marinka Qasa.
Xamaas iyo Islamic Jihad – inkastoo ay yihiin kuwo ka awood yar Israa’iil – haddana waxay heystaan hub ku filan inay ku weeraraan Israa’iil. Durbaba waxay isku dayeen isticmaalka xeelado kala duwan.
Qalabka difaaca Israa’iil wuxuu dhulka soo dhigay drone – ay suuragal tahay inay hubeysneyd – taasoo isku dayeysay in ay Qasa uga tallowdo dhinaca Israa’iil.
Khubaro reer Israa’iil ah iyo kuwo caalami aha waxay rumeysan yihiin in seynisyahanno u dhashay Iiraan ay gacan weyn ka geystaan dhismaha warshadahaas lagu sameeyo hubka.
Waxaase hubaal ah in ay heystaan hub faro badan oo tiiradoodu ay meelo kala duwan gaareyso. Sida cad, militariga Israa’iil waxay heystaan qiyaastooda u gaarka ah oo aysan dooneynin inay warbaahinta la wadaagaan. Afhayeennadoodu waxay sheegaan oo kaliya in Xamaas ay dagaalka noocan ah iyo tuurista gantaallada sii wadi karaan “Waqti dheer”.
Sidaas darteed way caddahay in Xamaas ay heysato hub lagu garaaci karo magaalooyinka Qudus iyo Tel Aviv labadaba, iyo in ay halis galin karaan guud ahaan marinta xeebta oo ay daggan yihiin tirada ugu badan ee shacabka reer Israa’iil ayna ku yaallaan kaabeyaasha ugu muhiimsan.
Previous articlebooliska Soomaaliya oo ka hadlay dhacdo shalay ka dhacday degmada Yaaqshiid kadib Markii Gabar lagu toogtay
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo caawa kulan casho iyo iswareysi ah u sameeyay madaxweyneyaasha dowlad-goboleedyada Galmudug, Jubaland Koofur Galbeed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye iyo Wafdi uu hogaaminaayo ayaa gaaray deegaanka Wisil ee koonfurta gobolka Mudug. Guddoomiyaha ayaa waxaa Wisil kusoo dhaweeyay maamulka...